गुगल स्थानहरू> गुगल प्लस पृष्ठहरू (अबको लागि) | मार्टेक ब्लग
सोमबार, नोभेम्बर 14, 2011 सोमबार, अक्टोबर 26, 2020 केविन मुललेट
यो तपाइँको सेटअप गर्न जान प्रोत्साहित गर्ने अर्को पोष्ट हुनेछैन व्यवसायका लागि गुगल प्लस पृष्ठ तुरून्त, न त यो कसरी गर्ने भन्ने बारे मा तपाइँलाई निर्देशन दिनेछ। स्वीकार्य रूपमा, यो यही हो जुन मैले गुगल + को रिलीजमा सुझाव दिने आशा गरिरहेको थिएँ, र मेरो वेबिनारको लागि त्यस तयारीको बाबजुद पनि, मैले वास्तवमै वैकल्पिक प्रस्ताव गर्नै पर्छ ... अहिलेको लागि।
किन केवल डुबुल्की मार्न? ठीक छ, जबकि हामी यो तथ्यको लागि अनुमति दिनुपर्दछ कि Google+ पृष्ठहरू अझै नयाँ नयाँ छन्, ती धेरै मुख्य क्षेत्रहरूमा छोटो भएका छन्। यहाँ केहि थोरै छन्:
त्यहाँ देखा पर्दैन कुनै सुरक्षा ठाउँमा कसैलाई तपाईंको व्यवसायको नामको साथ पृष्ठ बनाउनबाट रोक्नको लागि।
केवल एक पृष्ठ प्रति व्यवस्थापक अनुमति छ, र त्यहाँ स्थानान्तरण प्रणाली हाल छैन। अर्को शब्दहरुमा, यदि मैले सिरोस एबीएस छोडिदिएँ, म सिरोस एबीएसको ब्रान्डेड पृष्ठमा आफ्नो नियन्त्रण प्रकाशित गर्न सक्दिन (गुगलले भन्छ कि यो यस समस्यामा काम गरिरहेको छ)।
यो TOS विरूद्ध हो नक्कली खाताहरू सिर्जना गर्नुहोस्त्यसोभए, प्राविधिक रूपमा भन्नुपर्दा, एक वास्तविक व्यक्तिले Google+ खाता सेट अप गर्नु पर्छ। कम्पनीका सीईओ, कानूनी प्रतिनिधि, वा मालिक सामाजिक च्यानलहरू प्रबन्ध गर्ने जहिले पनि हुँदैन, यसले समस्या प्रस्तुत गर्दछ। (अघिल्लो बिन्दु हेर्नुहोस्)
गुगल + पृष्ठहरू खोज ईन्जिन नतीजाहरू (SERPs) मा देखाउँदै छन् तर राम्रो दर्जा छैन गैर ब्रान्डित खोजहरूका लागि (अझै)।
यो सूचना प्रणाली केवल हाँस्न योग्य छ। त्यहाँ कुनै दृश्यात्मक सूचना छैन कि कसैले तपाईंको पृष्ठमा व्यस्त रह्यो जबसम्म तपाईं ब्रान्ड पृष्ठ खोल्नुहुन्न। Google+ ले ईमेल सूचनाहरू पनि पठाउँदैन। गुगल बार रातो बक्स अझै पनी प्रशासकको व्यक्तिगत सूचनाहरु मात्र देखाउँदछ।
एक ब्रान्ड सर्कल गर्दै दुबै ब्रान्ड पृष्ठसँग तपाईले प्रबन्धन गर्नु भएको र तपाईको व्यक्तिगत गुगल + खाताको लागी धेरै सोच चाहिन्छ।
त्यसै गरी, तपाइँ प्रशासक ब्रान्ड चक्कर लगाउँदै डिजिटल विकृति आवश्यक छ। र पक्कै पनि तपाइँ आफ्नो ब्रान्ड पृष्ठबाट तपाइँको व्यक्तिगत Google+ खाता सर्कल गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाइँ तपाइँको ब्रान्ड पृष्ठलाई कसरी सर्कल गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाउनुहुन्न। अझै भ्रमित?
म जान सक्दछु र किन हाम्रो ब्रांडेड पृष्ठ एनएभीमा खेल मेनू आईटम छ भनेर सोध्न सक्छु, तर इमान्दारीसाथ, यसले Google+ पृष्ठ सिर्जना गर्ने मूल्य प्रस्तावमा थोरै प्रभाव पार्दछ; यसले भर्खरको कम प्रयोगकर्तालाई अनुकूल बनाउँछ। मेरो कुरा के हो भने, त्यहाँ उच्च मार्केटिंग मूल्यका अन्य क्रियाकलापहरू छन्, हुनसक्छ हामीले गुगल शरीरलाई यो केहि बढी गर्न दिनुपर्दछ।
मेरो सुझाव छ कि ब्यापारिजले पहिले गुगल प्लस पृष्ठहरू आफैंमा Google+ पृष्ठहरूका साथ आफैंको बारेमा दावी र बृद्धि गर्न निश्चित गर्नुहोस्। मलाई थाहा छ कि Google+ नयाँ, चम्किलो छ, र क्लाइन्टहरूसँग कनेक्ट हुनको लागि उत्तम तरिकामा परिवर्तन हुन सक्दछ, तर त्यहाँ पहिले नै राम्रोसँग अप्टिमाइज गरिएको Google प्लेस पृष्ठसँग सम्बन्धित फाइदाहरूको एउटा लामो ट्र्याक रेकर्ड छ। यदि तपाईंले कहिले दावी गर्नुभएको छैन, वा तपाईं आफ्नो गुगल प्लेस पृष्ठ ताजा गर्न चाहनुहुन्छ भने, माथी जानुहोस् गुगल स्थानहरू.
तपाईंको गुगल प्लेस पिम्प आउट भइसक्यो? मेरो दोस्रो छनौट तब अन्य स्थान गुणहरू जस्तै येल्प र बिंग हुनेछ। यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि नयाँ आईफोन ss मा सिरीले येल्प प्रयोग गर्दछ। बिंगसँग धेरै मोबाइल फोन खोजीहरू छन्, र याहू खोज परिणामहरू बिंगबाट आएकाले यसले BingHoo खोजीहरूलाई around०% मा राख्छ। यो सजिलो बनाउनको लागि, यी सबै स्थानीय लिस्टिंग लिनुहोस् getListed.org.
टैग: गुगल स्थानगुगल प्लसगुगल प्लस पृष्ठGoogle +एसईओसामाजिक मिडिया मार्केटिङ
केविन एक प्रमाणित वेब विकासकर्ता, इन्टरनेट मार्केटर, स्पिकर, अतिथि ब्लगर, र १ award बर्ष भन्दा बढी वेब अनुभवको साथ एक पुरस्कार विजेता डिजाइनर र 13०० कस्टम वेबसाइटहरू आफ्नो क्रेडिटमा छन्। केभिनले आफ्नो १ years बर्ष बिक्री र मार्केटिंग अनुभवको साथ सामाजिक मिडिया, खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन, उत्कृष्ट डिजाईन र साइरस एबीएस ग्राहकहरूको अनलाइन सफल हुन मद्दतको उपयोगिताको लागि एक जोश।
राम्रो पोष्ट! कस्तो रमाईलो कुरा यो हो कि मैले भर्खरै देखें कि कसैले "गुगल एनालिटिक्स" पृष्ठ राखेको छ र यसमा गुगलको ब्रान्डिंग पनि छ। नजिकबाट हेर्नु; यद्यपि, देखाउँदछ कि कोहीले गुगलको ब्रान्ड हाईज्याक गर्नुभयो। धेरै विडंबना! र यस्तो प्रकारको लाटो कि गुगलले यसको आफ्नै पृष्ठहरू प्रिलोड गरेन जुन यो सुविधाको साथ प्रत्यक्ष आएको थियो।
तपाईंले एउटा बिर्सनुभयो, कसरी तिनीहरूले G + ब्रान्ड पृष्ठहरूमा स्थानहरू जडान गरेनन् 🙂 lovellist.org लाई माया गर्नुहोस् (तपाईंबाट पहिलेको सुझावलाई धन्यवाद)
मैले क्रिसलाई कता रोक्नुपरेको थियो मैले भ्यानिटी युआरएलहरू, people००० व्यक्तिको / ब्रान्ड सर्कल सीमा, र अन्यहरूको होस्टलाई पनि छोडे।
विसम एल बहरी
मार्क्स 24, 2012 मा 12: 12 PM
5000 ppl को बारे मा निश्चित हुनुहुन्छ? मैले सोचे कि फेसबुकमा मात्र त्यस्तो सीमा छ! म निश्चित छु!
मेरो विचारहरू बिल्कुल, केभिन! जबकि मैले मेरो G + ब्रान्ड पृष्ठ स्थापना गर्न धेरै रमाईलो गरें वुडक्लिन ब्लग, मँ अझै कुनै व्यवसायको लागि G + पृष्ठ प्रस्ताव गर्दिन (किनकि मसँग वास्तवमै त्यस ब्लगको साथ हराउन केहि छैन)। मलाई थाहा छ म Google लाई तिनीहरूका केहि बीटा उत्पादनहरूमा नि: शुल्क पहुँच दिईएकोमा म सदैव धन्यवाद दिन्छु, तर उनीहरूको एसएम उपस्थितिमा भाग लिने जो कोहीसँग पनि यो अलिक बेटा हो।
यस पोष्ट केविनका लागि धेरै धेरै धन्यवाद! तपाई बिना म प्लेटफर्मको साथ कहिले पनि राख्न सक्दिन… तपाईं रक।